Toerana filokana Boliviana an-tserasera - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(455 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Loading ... Gambling ao Bolivia
Ny filokana any Bolivia dia tsy dia mandroso loatra, satria ny filokana rehetra dia tsy ara-dalàna tamin'ny ankamaroan'ny taonjato lasa. Tamin'ny 1930, voarara ny filokana any amin'ireo faritra fitrandrahana ao amin'ilay firenena, ary tamin'ny 1938 dia norarany tanteraka izany. Naharitra 60 taona mahery izany, namorona tany lonaka ho an'ny fampandrosoana filokana tsy ara-dalàna. Mba hisorohana ny fitomboany, tamin'ny 1996 ny governemanta dia tsy maintsy nanome fahazoan-dàlana vonjimaika efitrano 200 an'ny milina filokana sy filokana. Ny filokana ao Bolivia LONABOL dia notandremana hatramin'ny taona 1996 (Vaomieran'ny loteria nasionaly ho an'ny fiantrana sy ny fahasalamana).
Tamin'ny taona 2002, lasa ara-dalàna indray ny casino. Tamin'ny 2011, ny orinasam-panjakana no namorona izany hanome alalana hanome lisansa (manan-kery mandritra ny 10 taona) sy hifehezana ny filokana any Bolivia. Amin'izao fotoana izao dia tsy manana afa-tsy mpandraharaha filokana ara-dalàna 4 ny firenena: Lotex, Corhat, Jet Games ary Star Mirage. Any Bolivia, dia miloka tsy ara-dalàna ihany koa. Efitra filalaovana 200 sy milina slot maherin'ny 4,000 no miasa tsy ara-dalàna.
Gambling amin'ny Internet ao Bolivia
Ela ny governemanta Bolivia namaha ny olan'ny filokana amin'ny Internet. Amin'izao fotoana izao, tsy misy lalàna sy lalàna mifehy ny filokana amin'ny Internet, ary ny governemanta Boliviana dia tsy nandray fepetra hanakanana ilay mpilalao tsy hiditra amin'ny tranonkalan'ny mpandraharaha vahiny. Betsaka ny tranonkala filokana an-tserasera no manolotra serivisy amin'ny teny espaniola, ary misy aza manohana ny vola eo an-toerana.
Lisitry ny Top Casino Sites ao Bolivia amin'ny 10
Misy takelaka amin'ny aterineto ao amin'ny aterineto manaiky mpilalao avy ao Bolivia
Jereo ny lisitry ny tranokala an-tserasera izay manaiky mpilalao avy any Bolivia, ary manolotra kilalao avo lenta sy azo antoka. Eto ianao dia hahita fialamboly marobe avy amin'ny milina slot ka hatramin'ny lalao kasino mivantana amin'ny mpivarotra rindrambaiko malaza toy ny NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, sy ny maro hafa. Azonao atao koa ny mamaky ny hevitray momba ny tranokala an-tserasera, mba hahalalanao ny fampiroboroboana an-tserasera, bonus ary safidy fandoavam-bola tsara indrindra azon'ny mpilalao avy any Bolivia.
Sites poker amin'ny aterineto izay manaiky mpilalao avy any Bolivia
Jereo ny lisitry ny tranokala poker an-tserasera manaiky mpilalao avy any Bolivia, ary manolotra kilalao avo lenta sy azo antoka. Ankafizo ny maro karazana ny lalao roulette, blackjack, hold'em, ary kilalao hafa. Raha mila fampahalalana bebe kokoa, vakio ny hevitray momba ireo tranonkala poker an-tserasera mandray mpilalao avy any Bolivia.
Sites amin'ny fanatanjahan-tena an-tserasera, maka mpilalao avy any Bolivia
Jereo ny lisitry ny tranonkala filokana an-tserasera amin'ny fanatanjahantena, alaivo ny mpilalao avy any Bolivia, ary manolora lalao avo lenta sy azo antoka. Apetraho ny filokanao, safidio izay mety indrindra amin'ny hetsika koeffitsinty ao anatin'ny tolo-kevitr'ireo mpanao boky an-tserasera am-polony maro ao Bolivia. Ary raha mila fanazavana fanampiny, jereo ny tranokalanay fanatanjahan-tena filokana amin'ny filokana, haka mpilalao avy any Bolivia.
Sites bingo amin'ny aterineto manaiky mpilalao avy ao Bolivia
Jereo ny lisitry ny tranokala bingo an-tserasera, alaivo ny mpilalao avy any Bolivia, ary manolora kilalao avo lenta sy azo antoka. Ny fampahalalana bebe kokoa dia azo jerena ao amin'ny fanamarinantsika ireo tranokala bingo an-tserasera izay mamaritra ny fampiroboroboana, ny bonus ary ny fomba fametrahana ao amin'ny tranokala bingo an-tserasera izay azon'ny mpilalao avy any Bolivia.
Tranokalan'ny finday izay manaiky mpilalao avy any Bolivia
Jereo ny lisitry ny tranokala filalaovana finday, alaivo ny mpilalao avy any Bolivia, ary atolory kilalao avo lenta sy azo antoka. Eto ianao dia hahita fialamboly marobe avy amin'ny milina slot ka hatramin'ny lalao kasino mivantana amin'ny mpivarotra rindrambaiko malaza toy ny NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, sy ny maro hafa. Azonao atao ihany koa ny mamaky ireo tranonkalanay fandinihana finday hahafantatra ny fampiroboroboana an-tserasera, bonus ary safidy fandoavam-bola tsara indrindra azon'ny mpilalao avy any Bolivia.
0.1 Gambling amin'ny Internet ao Bolivia
0.2 Lisitry ny Top Casino Sites ao Bolivia amin'ny 10
2.1 Misy takelaka amin'ny aterineto ao amin'ny aterineto manaiky mpilalao avy ao Bolivia
2.2 Sites poker amin'ny aterineto izay manaiky mpilalao avy any Bolivia
2.3 Sites amin'ny fanatanjahan-tena an-tserasera, maka mpilalao avy any Bolivia
2.4 Sites bingo amin'ny aterineto manaiky mpilalao avy ao Bolivia
2.5 Tranokalan'ny finday izay manaiky mpilalao avy any Bolivia
supernova casino tsy misy deposit bonus